Uhlaziyo lweNkampani yeeMveliso zoXhobo eziTshintshayo zaseAsia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Uhlaziyo lweNkampani yeeMveliso zoXhobo eziTshintshayo zaseAsia
I-Everest Medicines ("i-Everest" okanye "iNkampani"), inkampani ye-biopharmaceutical egxile ekuphuhliseni nasekuthengiseni iimveliso zamachiza eziguquguqukayo ezijongene neemfuno zonyango ezingafezekiyo kwizigulana zase-Asia, namhlanje ibhengeze ukuba iphinde yathenga izabelo eziqhelekileyo ze-1,095,000 ezilingana ne-HK $ 50 yezigidi. kwimarike evulekileyo kwixesha ukusuka Oktobha 4, 2021 ukuya Oktobha 29, 2021, ngexabiso avareji HK $45.63 isabelo ngasinye. Iinkcukacha zentengiselwano zomntu ngamnye ziyafumaneka kwicandelo lomtyali-mali kwiwebhusayithi yeNkampani.
Ukuthengwa kwakhona kwenziwa phantsi kweHK$100 yezigidi zenkqubo yokuthenga kwakhona isabelo esibhengezwe ukususela nge-30 ka-Agasti 2021. Ngexabiso lesabelo sangoku, iNkampani ikholelwa ukuba izabelo zayo zirhweba ngesaphulelo esikhulu kwixabiso lazo elisisiseko, kwaye ingaqhubeka ithenga kwakhona izabelo imarike evulekileyo. Inkampani izibophelele ngokupheleleyo ekudaleni ixabiso labaninizabelo kwaye inokholo oluqinileyo malunga nenkangeleko yayo yexesha elizayo. Ukusukela nge-30 kaJuni ka-2021, iNkampani yayine-RMB3,971.0 yezigidi zemali kunye nezinto ezilingana nemali.
Inkampani iya kuqhuba nakuphi na ukuthengwa kwakhona kwesabelo ngokuthobela imemorandam kunye namanqaku ombutho weNkampani, iMithetho eLawula uLuhlu lweeSecurities kwi-Stock Exchange yase-Hong Kong Limited, iiKhowudi zokuThatha nokuDityaniswa kweSabelo, uMthetho weeNkampani Iziqithi zeCayman kunye nayo yonke imithetho esebenzayo kunye nemigaqo apho iNkampani iphantsi kwayo.